चन्द्रागिरि साकोसद्वारा व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा
२०७७ भाद्र २६ गते , शुक्रवार प्रकाशित
चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चालु आवको व्यवसाय निरन्तरता योजना पारित गरेको छ । संस्थाको भाद्र २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सो योजना पारित गरेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण विश्व आक्रान्त भईरहेको बेलामा समग्र अर्थतन्त्र पनि शिथिल भईरहेको र नेपाली अर्थतन्त्र समेत यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको परिस्थितिमा संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरु उक्त योजनामा समावेश गरिएका छन् ।
कोभिड १९ को असर परीक्षण तथा सदस्यहरुको पछिल्लो वित्तिय सक्षमता पहिचान सम्बन्धी सर्वेक्षण समेत सम्पन्न गरी सोबाट प्राप्त भएको तथ्यांकहरुको आधारमा संस्थाले आ.व. २०७७­/०७८ को अनुमानित नगद प्रवाह प्रक्षेपण, ऋणी सदस्यहरुको ऋण फिर्ता गर्ने क्षमता तथा सदस्यहरुमा कोरोना भाईरसले पारेको आर्थिक, सामाजिक तथा मनौबैज्ञानिक असरको समेत पहिचान गरेको छ ।
व्यवसाय निरन्तर योजनाको लागि एशियाली ऋण महासंघ (आकु) तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कुन) को प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।
रोशी गाउँपालिका र विन्धबासिनी साकोस बिच ब्याज अनुदान सम्झौता
जिल्लास्तरिय संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना हुने
के भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन होला !
सन्दर्भ व्याजदरमै अल्झियो विभाग, ऐनका प्रवर्द्धनात्मक विषयमा गएन ध्यान